Red akwara Thai Kratom Review, Mmetụta na Dosages
Ihe site Lyndon Reys	 21 Comments
Red akwara Thai Kratom (-mara nanị dị ka Red Thai) bụ otu n'ime ọtụtụ nhọrọ maka red akwara nje Kratom epupụta na ntụ ntụ ahịa taa. Nke a dịgasị iche iche a na-ukwuu atụrụ ndụ-enwe mmetụta dị na ọnọdụ na nke mmetụta uche na-. Ọ bụghị dị ka meekwa ka ụfọdụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwara na ngwaahịa, ma na mmetụta na-adịgide adịgide ogologo ma ọ na-arụpụta ihe nke a euphoric, mgbu n'ịgwọ mmetụta. Ezie na ụfọdụ na-echekwa na-eme na-ere Green Thai Kratom, ọtụtụ ndị Thai Kratom rere taa bụ nke a red nje si. Ngwaahịa na-eburu Thai Red akwara aha adịchaghị si bịa Thailand ebe ọ bụ na iwu na-akwadoghị ịzụlite na-ere Mitragyna Speciosa. Ọtụtụ n'ime ndị a herbs na-toro si osisi na e dị ka Indonesia, karịsịa n'àgwàetiti Borneo. Ọ dị mkpa icheta na ọ bụghị ihe niile na nsụgharị nke Red akwara Thai Kratom ga-abụ otu, ma ha niile na kwesịrị si bịa a red akwara osisi ma ọ bụrụ na ị na-ịzụta si a reputable soplaya. Ịzụta Kratom Online si atụ aro mgbere ebe a.
Gịnị bụ Red akwara Thai?
Red akwara Kratom ngwaahịa niile òkè otu njirimara: ha si bịa osisi na-epupụta na ọbara ọbara ị ga na veins. The agba nke stringy Central akwara kpebisiri ike site na ọnụnọ nke dị iche iche Chemicals na osisi. Ụfọdụ n'ime ndị a dị iche iche nwere ike ịbụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị dabeere na ụdị osisi na epupụta na e si. Ọtụtụ Kratom ọrụ ugbo na-ekwu na-acha uhie uhie veined osisi ndị ọzọ resilient na a elu mkpụrụ n'ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia climates. Otú ọ dị, e nwekwara na-akọ na dị iche iche acha veins -erukwa otu osisi dị iche iche nkebi ke lifecycle. -Acha ọbara ọbara veining nwere ike ịbụ ihe na-ahụkarị tọrọ osisi ndị ọzọ na-adịghị ike na-awakpo si ụmụ ahụhụ. Ọzọ tiori na-ekwu na ndị dị iche iche akwara agba iputa ofụri isua dabere na mpụga ọnọdụ dị ka okpomọkụ na ihu igwe na.
N'oge gara aga, Kratom akwukwo pickers ga-ekewapụ epupụta dabere na ha akwara agba n'ihi na ha hụrụ na e nwere ndị na-agbanwe agbanwe iche iche na mmetụta ndị mekọrịtara ka akwara coloration. N'izugbe, red akwara capsules na powders na-hụrụ dị ka ndị kasị mma maka ntụrụndụ, nnọchi nke mgbu ọgwụ, na dị ka ọnọdụ enhancers. Ndị a ókè ga-ele anya dị ka rụrụ characterizations kama ike na ngwa ngwa iwu maka otú Red akwara Kratom ga-emetụta gị; nta mgbanwe usoro nke oriri, ngwaahịa potency, onye n'ihi mmiri ọgwụ na metabolism nile pụrụ ịgbanwe ahụmahụ gị mgbe na-ewere a ogwu. Ọ bụkwa nkịtị ụbọchị ndị a na mix dị iche iche pụta dị ka Red Thai na Green Thai ọnụ iji nweta a synergistic na ezi mmetụta.
Red Thai Kratom Mmetụta
Otu Red akwara na ngwaahịa, na Thai nje na-eme ịbụ otu n'ime ndị kacha mma-ere, ikekwe abụọ nanị na ịgbapụta Red akwara. Red akwara Thai Kratom iche na Bali Kratom ole na ole banyere. N'izugbe, Red akwara Bali kwuru na nwere ihe nwere ike ogwuura mmetụta mgbe Red Thai nwere ike ịbụ ihe na-akpali akpali, karịsịa na ala doses. The Thai nsụgharị na-hụrụ-adịru ogologo oge karịa Bali pụta ma na-ubé na-erughị ike mgbe eji dị ka analgesics ịgbagha mgbu. Ma mee ka irè opiate ọzọ na ike ga-eji dị ka na-ehi ụra ma ọ bụ ọrịa AIDS iji belata ịda mbà n'obi na nchegbu. Red akwara Thai Kratom na-karịsịa hụrụ ka nwere a ala ize ndụ nke mmetụta na ịbụ obere yiri ka n'ihi na ọgbụgbọ.
Gụọ Ịnye Nyocha na Best Kratom nje.
Olee otú Were Red akwara Thai Kratom
Ị nwere ike ịzụta Thai Red akwara powders, anuahade epupụta ma ọ bụ capsules online si a ọtụtụ dị iche iche Jeriko. Ọtụtụ ikpe, Thai Kratom bụ ubé oké ọnụ karịa ndị na ngwaahịa rere n'okpuru Bali aha, ma ihe dị iche nanị ngụkọta a di na nwunye nke dollar kwa ounce. Nnukwu ntụ ntụ ga-eri gị dị ka obere ka $18 kwa ounce. Mgbe ọ bụla ịzụta Kratom online, na-agụ reviews si ndị ọrụ ndị ọzọ na-zụrụ otu nje dị ka ị na-. Nke a bụ ụzọ kasị mma iji chọpụta ma ị na-na-a n'ezie ngwaahịa na-adịgide ndụ ruo aha ya.
Na-atụ aro usoro onunu ogwu maka Red akwara Thai Kratom bụ n'ebe ọ bụla n'etiti 2 ka 8 grams kwa ụbọchị. Mgbe ala ọgwụgwụ nke a dosing ụdịdị dị iche iche, Kratom ike dịkwuo gị etoju nke iche echiche ike, na-akpali, mbanye na alertness. Na nke a ùgwù, Red Thai nwere ike iji tụnyere loosely ka kọfị, ọ bụ ezie na ike na Kratom enye a na-aba na-adịgide adịgide na mụrụmụrụ karịa caffeine. Nke a mmalite nwere ike inye gị mma ume mgbe na-ewere on achọ ọrụ, ma obere okwu ọrụ na-ahụ na ọ pụrụ iduga erughị ala na nchegbu. Ọ bụrụ na ị na-enwe ihe ọjọọ ndị a na mmetụta, agbalị ịmafe ka a nta dose ma ọ bụ agwakọta elu dị iche iche pụta. N'ihi na ọtụtụ akụkụ, Thai Kratom a kọwara dị ka ndị nwere a calming mmetụta na ọ pụrụ n'ezie na-ihu n'ebe ọzọ na-akpali akpali nje dị ka Green Thai. Lelee anyị na ndu ka mmetụta nke Kratom nje ebe a.
Ọ bụrụ na ị na-ewere Kratom-enyere gị aka imeri nchegbu, ịda mbà n'obi, nchegbu ma ọ bụ ndị ọzọ ọrịa uche, a onunu ogwu nke n'etiti 4 - 8 grams ga-enye gị nsonaazụ kacha mma. Mgbe a na onunu ogwu larịị, Thai Red akwara ọzọ bụ sedating na-eme ka a n'echiche nke nkasi obi na obi iru ala. Gburugburu 4 grams, Red Thai kwuru na-abụ ukwuu uplifting na ike na-aghọta na-eme ka euphoric mmetụta. Mgbe na-ewere 8 grams ma ọ bụ karịa nke Red akwara Thai Kratom, ọ na-aghọ a nwere ike mgbu aspirin, ekechikwa ozugbo na opiate anabata na ụbụrụ. Ndị a ibu doses kwesịrị kwesịrị a ga-eji nanị maka a mkpirikpi oge na ị kwesịrị ị na okirikiri n'etiti dị iche iche pụta na-ahụ gị mgbe niile ukpụhọde. Nye Thai Red akwara a na-agbalị ma ọ bụrụ na ị chọrọ mma gị na ọnọdụ na-esi na-ehi ụra mfe na a nchebe na ego Kratom nje.
kwuru 5 afọ ndị gara aga
Hi im mbọ ịkwụsị ịda mbà n'obi, ehighị ụra nke ọma na nrụgide m na-eche ihe ga-abụ ihe kasị mma kratom nje m na ihe ga-abụ ihe kasị mma onunu ogwu?
kwuru 4 afọ ndị gara aga
Hey m na-ahụ gị ikwu bụ ọnwa ole na ole ochie, ma m na-eji Kratom fọrọ nke nta kwa ụbọchị maka otu mgbaàmà ị na-enwe nakwa dị ka enyere merie a 5 afọ opiate riri. Ọ gbanwere ndụ m na ọtụtụ mma ụzọ. M na-ahọrọ a red akwara Bali, ma mgbe ụfọdụ iji red akwara Thai ọ bụ ọbara ọbara akwara Indonesian. M na-gbalịrị ọtụtụ ọtụtụ iche na ndị a nwere ihe kasị mma (n'ihi na onwe m) mmetụta m na-achọ na ihe anxiolitic, ụra aka di irè opiate anọchi mgbu. Olileanya a na-enyere!
ga-ịgbakwunye na onunu ogwu nwere ike ịdị iche na nke si na onye ọrụ ka ọrụ. M ga-amalite na gburugburu 4 ma ọ bụ 5 grams ma na-amụba ọ bụla 30 min ka hour ruo mgbe i ruo ezi mmetụta. 5-8 grams bụ m nkịtị dose
Kye…M nwere ịda mbà n'obi na tinye. M nọ na-ewere maeng da maka mgbe na ya nyeere tremendously ma wasnt arụ ọrụ ruo ogologo oge nke. M chọpụtara na m na-enwe na dose 3X kwa ụbọchị!! Na-akawanye oké ọnụ ma na-akpasu iwe. M dị nnọọ zụtara ụfọdụ Bali na red Thai. M na-aga na-agbalị nke mix. Maeng da-echetara m ihe mmanya tipsiness ụdị. Nke ahụ bụ ụzọ kasị mma m nwere ike na-akọwa ya. M chọrọ ihe ọzọ izuike ka m tinye na m na-adịghị mkpa ihe na-elu m ọzọ!! Nchegbu bụ ihe ọjọọ n'ihi na ndị mmadụ na tinye na m chere na m nwere ọtụtụ doro anya na nrọ na maeng da na ya mere ka o siere ụra n'abalị. M na-enwe olileanya na a ga-arụ ọrụ mma. Onye ọ bụla bụ dị iche iche n'agbanyeghị ịbụ! Ẹkûkpa na e nwere ọtụtụ ụdị onye ga-arụ ọrụ ị!!!
M gbalịrị a ole na ole na onye na bụ ihe kasị izuike na-enyere m aka na ihe iseokwu ndị yiri na-Bali. Classic Bali ka ya maka m. Ọ bụ ihe kasị mma mkpu maka gị Akon kwa. Dị nnọọ mma maka ihe mgbu dị ka nke ọma.
Recived mbụ m Mbupu, 3 varities m bịara Ekwughị kasị mma nke varity mkpọ mbụ nyere iwu banyere a n'ọnwa gara aga (Maeng Da ). My ndị enyi na-njakịrị m n'ihi na ihe niile m na-eme bụ ikwu banyere Kratom. M na-agụ ihe na ọzọ banyere ya ka i na-ọzụzụ onwe m. M na-atụ aro ka ndị enyi m na-agụ banyere Kratom mbụ tupu m ga-eso ọ bụla. Nke ahụ bụ ihe dị mkpa ka m na ịbụ ọrụ. M nọgidere na-blown pụọ site na niile nke ọtụtụ ndị maara ihe si n'ebe na-ewere nke a osisi na-egosi na ọ na-akwanyere dị ka anyị kwesịrị ọ bụla ogwu na Chineke anyị nyere anyị na-adịghị eme ihe n'ụzọ na. ọ, na-ewe otu ọjọọ merenụ na Gov ga wepụ ya. Ma hey ọ bụ OK ka ha mee methadone na-enye ya. !#!Ndo anya tangent.!#! M edebe a magazin, otú ahụ ka m mara ihe ga-arụ ọrụ maka m. Good bye na-ekele unu niile ka na-ekere òkè gị ahụmahụ.
ekwenyere m. Ọ dị ezigbo mkpa iji nke a dị egwu botanical akpọrọ. M ike na-egosipụta ekele m nwere maka ihe ọmụma nke a osisi na ego nke enyemaka m natara n'aka-ewere ya maka ala ala mgbu. Ọ nyere m ihe enyemaka karịa ihe ọ bụla opiate ọgwụ nyere m site ọ bụla dọkịta ọbụna IV ọgwụ mgbe Ịwa. M ga-họọrọ a osisi ọ bụla nke ndị. N'ihi ya, ọtụtụ mmetụta, ajọ ọgbụgbọ na ịbụ a zombie tinye bụghị otu ounce ka onye ọ bụla àgwà nke ndụ! M nwere a 90% ntọt ke m àgwà nke ndụ kemgbe achọta a osisi. M malitere iji Maeng Da @ 2-4 grams. M ugbu a na-eji na gburugburu 4 grams adịchaghị Indo maka ụbọchị enyemaka na ihe ọ bụla 3 ụbọchị adịchaghị red akwara Thai @ 5 grams n'ihi na abalị oge Jiri naanị dị ka ọ dị irè na-atụrụ ndụ m ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla kwesịrị m anya m na m pụrụ ime ka ọrụ na-enweghị ndidi “na site na ya”. Ọ bụ ihe magburu onwe ya ga-ebi ọzọ! Nọrọ ọma asian. Ekele niile.
Red akwara Thai Kratom ga-a elu-edu dị ka akụkụ nke a ngwakọta. Ọ nwere a ọzọ ahụ uzu dị ka iji tụnyere ndị ọzọ Thais. Ọ na-nwere ụfọdụ nke edginess nke TMD, ma fọrọ nke nta ka ihe. Longer na-adịgide adịgide karịa TMD kwa. Mara nke ọma mechie, ka Green Malay Kratom, ma edgier, ọzọ ufiop, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ezigbo. Ọ bụghị dị ka ogologo-eme ma.
M na-enwe oké nchegbu na m na-eche ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere m nwekwara ọjọọ ogbu na nkwonkwo si akpọ music m egwu guitar na piano na m na-eme mgbe ụfọdụ ruo 10 awa ụbọchị na nke a anya dị ka ọ ga-idozi ma ndị a nsogbu ọ bụla ihe mere m kwesịrị dochie anya nke a na-emegide nchegbu ọgwụ ọjọọ na ha na-enye m ugbu a ọ bụ kwesịrị ya?
M na-enwe oké nchegbu na m na-eche ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere na m ogbu na nkwonkwo na m si n'ihe na-akpọ music m egwu guitar na piano omume 10 awa ụbọchị na m chọrọ ihe iji dochie ọgwụ ọjọọ na ha na-enye m si dọkịta na a anya ka ọ ga-eme ma ọ bụla ọ ga-abụ oké na-ekele gị nke ukwuu
Ya mere, olee ogologo mere o maka unu na-enweta Ua Mbupu? Mine e nyere iwu ka banyere 4 ụbọchị ugbu a. M nyere iwu si red Thai collection. Ọ bụla reviews na mmetụta?
M ga-esi m si Cali ọ na-ewe 3 ụbọchị na-esi PA. Mgbe niile mma kratom abịa. Ọ bụ oké chọta ụfọdụ ụlọ ọrụ nditop ke free samples. m nwetara 10 GS nke red Malay + 10 GS nke green Borneo on top of 1 ounce Malay na 1 ounce of Thai red akwara. M na-ahọrọ Maeng-da ma ọ dị nnọọ ka e achapụ n'oge na-adịbeghị. All na niile oké kratom ngwaahịa dị mfe..
M nwere adịghị ala ala n'olu pain..will a ọrụ? Ọ ga-eme ka m sleepy..tjanks
Ana m achọ a Strand, ka nyere ndị withdrawls imeri opiate-eri ahụ. ọ bụla Advice?
Ọ bụghị n'aka na ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla nzaghachi m na-ahụ ya kemgbe a di na nwunye nke ọnwa kemgbe gị post red vien Borneo bụ ebube gị akpan akpan ọnọdụ. O nyeere m nnọọ.
hey Chris, M ugbu a oyi toki anya 60 mg methadone kwa ụbọchị. M malitere na Maeng Da n'ihi na m na e nyere a free sample. Maa obi ụtọ na m mere ya. Kratom ebelata banyere 80 percent nke withdrawals. Dị ka eleghị anya ị maara, methadone na-maara na-kpam kpam kasị njọ WD nke niile opiates. Ọ na-hoo haa na-edebe m ndụ. M na-eji ihe ọ bụla maka 1st 48hrs na biri vomitting na-asa ahụ ruo otu awa na ụbọchị 2. N'abalị ahụ m were Kratom samples m nwere na-ututu ụgbọala ogologo ụlọ ahịa n'ihi na ihe. Ekemende Red akwara Thai maka ya mgbu na-egbu Njirimara. maa arụ ọrụ. Ị nwere ike nweta dị ọcha na Kratom. Naanị kpachara anya, adịghị eme ka a mpụta nkwaghari a dị iche iche riri. Ekwu Kratom bụ mmadụ ahụ nke ukwuu ma ihe ọ bụla nwere ike ịbụ na-eri ahụ ruo n'ókè.
Red Bali, odo Bali na red maeng da . red Bali maka ụra, odo mgbe ị chọrọ a obere ike na maeng da mgbe aru-unu bu tweaking si.
Red Thai-enyere m aka n'ọtụtụ ụzọ, ya bụ ala ala olu mgbu, arụ ọrụ ike ọgwụgwụ, tinye, ọnọdụ inwego, creativity na echiche na nkà ọrụ dị ka nke ọma dị ka na-arụ ọrụ 2 ọrụ. m na-eji 2 ka 8 grams na a ụbọchị. M bugharia m agba pụta ,red, na-acha ọcha,green na m na eserese na mmetụta ọ bụla na nje, onunu ogwu, mmetụta na-eji ibiere ndị dị otú ahụ dị ka ume,nootropic mmetụta,na-eche echiche,mgbu Mbelata, ọnọdụ, oge. M n'anya eziokwu na onye ọ bụla nje / agba nwere dị iche iche profaịlụ e ji mara, dị ka kpakpando nke elu-igwe ọ bụla posses a dị iche iche mara mma na nzube. Kratom bụ Chineke osisi. ka hep kpọrọ mmadụ, Ana m ede ihe a na 2 grams nke red Thai.????
M na-ewere 2 gms Red Thai ọ bụla 4-5 aka elekere maka mgbu ma na-eche ihe ọ bụla, ma na-adịghị mma ma ọ bụ uru. Nke a bụ mbụ m izu. Ọ dị mma ime ka 4 gms kwa 4-6 aka elekere maka n'oké ihe mgbu?
Mark, ọ bụ kwuru na a dose of 2-4 grams bụ kasị mma n'ihi na a na-akpali akpali mmetụta na a dose of 6-8 grams bụ kasị mma n'ihi na a mgbu ebelata / sedating mmetụta. Na na-ekwu na m nwere ike ịghọta ihe mere 2 grams na-enweghị mmetụta na ị. Best chioma.
Nnọọ, M na-adịghị na-achọ ihe mgbu enyemaka. Ihe m na-achọ bụ ihe na ọnọdụ na-ewuli elu, a echiche nke ọma ịbụ. Echere m na m na-ata ahụhụ dị nro ịda mbà n'obi. Gịnị nje ga-adị mma n'ihi na,?
Nkwado Usoro * 0+7=?
Maeng Da Review - Nke a Best Thai Kratom nje?
Na-eto eto Kratom osisi N'ihi Personal Jiri
Thailand Kratom: Is it Legal, Where to Buy it & the Best Strains
Kratom Half Life & Duration of Effects By Strain